Ikhoyili yensimbi ebandayo ebunjiwe, Ikhoyili yensimbi ehlanganisiwe - iRuiyi
Ukwaneliseka Kwakho, Injongo Yethu
Inikezela Ngemikhiqizo Ebanzi
Big Zero Spangle Ukuze Outer Walls Zezıhlabane bacwilisa Gal ...
I-Premium China Aluminium Checkered Plate Sheets ...
Uyemukelwa kuNkampani Yethu
Singumhlinzeki wokukhiqiza okhonze ngamakhasimende, omusha futhi oqhutshwa ngenani nomthengisi wezinto zokusetshenziswa ezenziwe eChina.
Sasimele i-China Mill efana ne-Baosteel, i-Ansteel kanye nenkampani ethile yensimbi yangasese ethengisa ikhoyili / i-SPCC yensimbi ebandayo ebunjiwe / i-SGCC, ikhoyili yensimbi yensimbi esetshenzisiwe / ikhoyili yensimbi ye-Aluzinc, Ikhoyili yensimbi eyenziwe ngophawu lwangaphambilini, i-PPGI ebandayo okusanhlamvu okususelwe ensimbi / i-CRNGO, namakhoyili eshidi le-aluminium.
Asithengisi kuphela izinto zensimbi kepha futhi sinikela ngensizakalo yokuhlonza evela eChina
I-Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd ingumkhiqizi ohola phambili ophelele wensimbi eChina.
Aluminium ipuleti imodeli sebhithi introd ...
Zingaki izinhlobo zamapuleti ensimbi e-aluminium akhona? Isetshenziswa kuphi? Lapho uthenga ama-aluminium veneers, sivame ukubona ukuthi kusetshenziswa amapuleti e-aluminium ayi-1100 njengezinto zokusetshenziswa. Ngakho-ke lezi zinhlobo zamapuleti e-aluminium ...
Surface ukwelashwa indlela yokwelashwa ye-alumi ...
Zingaki izinhlobo zamapuleti ensimbi e-aluminium akhona? Isetshenziswa kuphi? Ukuklwebheka ebusweni bamapuleti e-aluminium kungenzeka kakhulu enqubeni yokucubungula i-aluminium plate. Imvamisa kubangelwa yi-imprope ...